I-Whatsapp ye-PC | Kusuka kuLinux
I-WhatsApp ingelinye lamathuluzi e-Messenger athandwa kakhulu okwamanje, kepha kungenzeka ukuthi kungekudala sizozama ukufaka I-whatsapp ye-pc, ngoba ngokungangabazeki uhlelo oluhle kakhulu lokukwazi ukugcina ukuxhumana nabangane nemindeni yethu kodwa ngokusebenzisa ipulatifomu entofontofo, efinyeleleka futhi esebenziseka kalula. Ngaleso sizathu, namhlanje sizochaza ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-WhatsApp ye-PC ngaphandle kwesidingo sokufaka amanye amathuluzi.
Uhlobo olusha lwe-WhatsApp ye-PC
Iqiniso ukuthi selokhu kwavela ama-emulators we-Android we-PC, noma ngubani ukwazile ukusebenzisa amathuluzi afana neWhatsApp ngqo kumakhompyutha awo. Kodwa-ke, inkinga ukuthi sesivele siphoqelekile ukufaka ezinye izinhlelo futhi sizisebenzise, ​​okubambezela ukusebenza kwamakhompyutha amadala, ngaphezu kwalokho, uma sishintsha ama-PC njalo ngoba sihamba kaningi, sinamakhompyutha amaningi ahlukene emsebenzini nasekhaya, njll., saphoqeleka ukuthi sifake ngamunye wabo.
Lokhu sekuvele kushintshile ngenxa yenguqulo entsha yeWhatsApp yePC esizokhuluma ngayo ngalesi sikhathi.
Finyelela ku-WhatsApp kusuka ku-PC yakho
Futhi ukuthi kusukela manje kulula ukusebenzisa i-WhatsApp ye-PC njengoba kunjalo ukuya kunoma yiliphi ikhasi lewebhu.
Vele, okokuqala nje nokuthi yonke into isebenze kahle, into yokuqala okufanele siyenze ukuvuselela inguqulo yethu yeselula ye-WhatsApp ukuze sijabulele okwakamuva okutholakalayo.
Uma usuqedile, esizokwenza ukuya kuwebhusayithi ye-WhatsApp usebenzisa isiphequluli se-Google Chrome. Manje sithatha idivaysi yethu bese sifaka isigaba sezilungiselelo bese uchofoza ku-WhatsApp Web. Isinyathelo esilandelayo kuzoba ukulanda ikhodi ye-QR evela ekhasini lewebhu kukhompyutha yethu futhi ngemizuzwana embalwa nje sizobona ukuthi iWhatsApp izovuleka ngokuzenzekelayo.
Njengoba sikwazi ukubona, inqubo ayigcini nje ngokulula kepha izothatha nemizuzu embalwa, ngenkathi singayenza nganoma iyiphi ikhompyutha ene-inthanethi ne-Google Chrome browser efakiwe.
Ngenye indlela, enye indlela yendabuko yokufaka I-whatsapp ye-pc Kungenxa ye-Bluestacks, i-emulator ye-Android ye-PC enedumela elihle futhi okulula kakhulu ukuyifaka, yize, yebo, kulokhu kuzodingeka sifeze ukufakwa okuphelele kulowo nalowo mishini yethu yekhompyutha.
Uma ufuna ukuyibona igxathu negxathu ungabona le enye indatshana - >> Faka i-whatsapp kwi-PC
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » I-Whatsapp yepc
Amazwana ayi-25, shiya okwakho
inkambiso patricia laguna kusho
Phendula u-norma patricia laguna
Ubuchwepheshe obuhle kakhulu
Isicelo esihle kakhulu
wilfredo querales kusho
Phendula kuma-wilfredo querales
milena andrea kusho
Phendula ku-milena andrea
Kuhle ukuba nalolu hlelo lokusebenza
Nahomi gonzales kusho
Phendula uNahomi Gonzales
Ngicela ukulanda i-wattsap ku-pc yami ngicela
Leidy Diana kusho
Ngifuna ukuba no-whatsapp
Phendula ku-neidy diana
Ngifuna nje futhi ngidinga okuningi ukuze ngibe ne-whatsapp
Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza, ngaphandle kokuxhumana, libuyekezwa ngokwengeziwe, izingcingo zamahhala zingenziwa, njll, uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu olusetshenziswe kahle kakhulu.
upercy alexander kusho
Phendula u-percy alejandro
Angazi ukuthi ngikwenze kanjani?
Ok sep ungabiza u-r
Ngine! Ucingo aluvuselelwe, othile angisize Ngiyacela
Sawubona Yorleni vula amasethingi bese uya kokujwayelekile futhi lapho uvula izibuyekezo.
yadira barboza magaña kusho
Sawubona, ngifuna ukuba ne-WhatsApp
Phendula ku-yadira barboza magaña
Idethi yokukhishwa ye-Xfce 4.12 engenzeka
Setha ibhokisi lokungenayo ku-Gmail